Waaxda Ganacsiga Kobcinta Ganacsiga Soo Gudbinta Maaddooyinka - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Maareynta Kobaca|Waaxda Washington ee Kobaca Maareynta Kobcinta Qalabka
Shuruudaha iyo nidaamyada bixinta ogeysiiska gobolka
Magaalooyinka iyo degmooyinku waa inay ku wargeliyaan Waaxda Ganacsiga, ugu yaraan 60 maalmood ka hor, ujeedkooda ah inay qaataan qorshe dhammaystiran iyo wax ka beddelka xeerarka horumarinta. Magaalooyinka iyo degmooyinku sidoo kale waa inay ku bixiyaan ogeysiis korsasho toban maalmood gudahood marka u dambaysa korsashada ugu dambaysa ee isbeddeladan.
Ogaysiis 60-Maalmood ah oo ah Ujeeddada Lagu Ansixinayo Wax-ka-Beddelka-Tilmaamaha iyo dukumiintiga Su'aalaha La Weydiiyo
Waaxda Ganacsiga ee Washington waxay ku faraxsan tahay inay bixiso nidaamkeenna cusub ee PlanView. Nidaamkani wuxuu u oggolaanayaa gobollada iyo magaalooyinku inay soo gudbiyaan oo ay la socdaan ogeysiisyada wax ka beddelka ee loo gudbiyay hay'adaha gobolka si loo helo qorshahaaga dhammaystiran ama wax ka beddelka qawaaniinta horumarinta ee khadka tooska ah, leh ama aan lahayn koontada isticmaalaha.
Si aad u dejiso Koontadaada Qorsheynta Ganacsiga:
Isdiiwaangeli a SAW xisaabi oo ku dar Adeegga PlanView.
Soo Gudbi a Foomka Codsiga Helitaanka Nidaamka PlanView.
Marka la ansixiyo, waxaad heli doontaa emayl soo dhaweyn ah. Buugaagta isticmaalaha waxay ku jiraan Iskuxirayaasha Caawinta midig.
Noocyada ogeysiisyada ee lagu soo gudbin karo iyada oo loo marayo PlanView
Ogaysiis 60-maalmood ah oo ujeedadiisu tahay in wax laga beddelo
Codsiyada Dib-u-Eegista Degdegga ah / Ogaysiiska ujeeddada ah in la qaato wax ka beddelka (Kaliya waxaa loo heli karaa Shuruucda Horumarinta)
Gudbinta Dheeraadka ah ee Ogaysiiska Jiritaanka Ujeeddada Qaadashada Waxka beddelka
Ogaysiiska Qaadashada kama dambaysta ah
Haddii aadan haysan koontada nidaamka PlanView, waad soo gudbin kartaa wax ka beddelkaaga oo waxaad codsan kartaa koonto si aad ula socon karto gudbintaada.
Sii joog marti ahaan
Ka soo gal marinka loo yaqaan 'Secure Access Washington' (SAW) si aad u hesho khibrad buuxda.
Waxaad sidoo kale ku soo gudbin kartaa emayl ahaan. Buuxi daboolka kuna lifaaq, oo ay la socdaan nuqul ka mid ah gudbintaada:
Kaqeybgalka wakaaladda gobolka ee qorshaynta deegaanka
Dhisidda mustaqbalka Washington waxay u baahan tahay isku-dubarid wax ku ool ah oo u dhexeeya gobolka iyo dowladda hoose. Muwaadiniinta Washington waxay filayaan in gobolka iyo dowladda hoose ay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa natiijooyinka dowlad wanaag. Tani waa sababta dawladaha hoose iyo dawladaha hoose ay uga go'an tahay wadahadal wax ku ool ah, oo socda oo ku saabsan isticmaalka dhulka iyo arrimaha horumarinta ee khuseeya labada dhinac.
Hay'adaha Gobolka, iyagoo kaashanaya Ururka Gobolka Washington ee Gobollada iyo Ururka Magaalooyinka Washington, waxay soo saareen mabaadii'da qeexaysa sida lagu gaaro xiriir iskaashi oo u dhexeeya gobolka iyo dowladda hoose. Mabaadi'da Xiriirinta Hay'adda Dawladdu Maamusho ayaa dejisa waxyaabaha laga filayo iskaashigan.
Warqad Tusaale ah Agaasimayaasha Wakaaladda Gobolka
Mabaadi'da Xiriirinta Wakaaladda Gobolka ee Sharciga Maareynta Kobaca
Xiriirro caawimaad leh
Soo Galitaanka Qorsheynta iyada oo loo marayo SAW
SAW Caawinta Farsamada
Qorshaha Dawlada Hoose ee Arag Buugga Isticmaalaha
Foomka Codsiga Helitaanka Nidaamka PlanView
Buugga Qorshaha ee Hay'adda Gobolka
Kooxda Dib u Eegista